Isifo sikashukela > Isifo Sikashukela Sokunqoba!
Ukwehlisa ushukela wegazi enganeni: izimbangela ze-hypoglycemia
Izimbangela ze-Hypoglycemia kuzingane ezisanda kuzalwa Ungakhathazeki ukuthi usana olusanda kuzalwa lusengozini ngenxa kashukela omncane wegazi. Abahlinzeki bezempilo abaningi bazobe bekhona ukuze baqinisekise ukuthi impilo yengane yakho iphephile. ...
Ungawehlisa kanjani i-cholesterol ngokuya esikhathini kubantu besifazane?
Kungani abesifazane abane-post-menopause kufanele bayeke ukwelashwa ukwehlisa i-cholesterol yabo. ...
Kungani kunendlala engapheli yesifo sikashukela?
Umuzwa oqhubekayo wendlala kufanele wethuse - Odokotela ababizwa ngokuthi uphawu lokuqala lwesifo sikashukela .. Umuntu kufanele futhi aqashelwe ukoma okungapheli, umlomo owomile, ubuthakathaka, ukuchama ngokweqile nokuhlala njalo nokunambitheka kwensimbi emlonyeni. ...
Mayelana nezinhlobo, izinkinga kanye nokwelashwa kwama-cysts e-pancreatic
I-cyst kuma-pancreas: i-prognosis futhi kungani iyingozi? I-pancreatic cyst ingumugqa osemgodleni wesitho sangaphakathi, esilinganiselwe odongeni lwezicubu ezithintekayo. ...
Thayipha isifo sikashukela sasekuseni ngo-2 ekuseni
Umcimbi wokusa kokusa kwabanesifo sikashukela isifo sikashukela yi-endocrinopathy evame kakhulu kubantu besintu emhlabeni. Umkhuba wokusa kokusa ukwanda kwe-glucose ekuseni, imvamisa kusuka ku-4 - 6, kepha kwesinye isikhathi ihlala kuze kube ngu-9 ekuseni. ...
I-pancreatic lipomatosis - kuyini
I-pancreatic lipomatosis Lipomatosis inqubo inqubo lapho kukhona ukwephulwa ukwakhiwa nokukhula amaseli fat. ...
Isifo sikashukela 1 isela noma ukuqulwa kwecala
I-"Diabetes mellitus akuyona isigwebo, kepha yindlela yokuphila." Sekukonke, kuneziguli ezingaphezu kwezigidi ezingama-400 ezinesifo sikashukela emhlabeni. Ezweni lethu kunabantu abangaphezu kwezigidi ezine. Futhi phakathi neminyaka engama-20, lezi zinombolo zikhonjwa yi-WHO ukuze ziphindwe kabili. ...
Ukuvela kwe-spasm kuma-pancreas: izimpawu nezindlela zokwelashwa
Ungayidambisa kanjani i-pancreatic spasm kanye ne-pancreatic colic? I-pancreas yindlala yesibili ngobukhulu emzimbeni womuntu. Itholakala phezulu kwesisu, okungukuthi ngqo ngemuva kwesisu. ...
Isifo sikashukela insipidus: izimbangela, izimpawu nokudla
Yini i-insipidus yesifo sikashukela? Isifo sikashukela i-insipidus (isifo sikashukela i-insipidus syndrome) kungukungaboni ngasese ekusithekeni noma ekukhiqizweni kwe-hormone ye-antidiuretic ebonakala nge-polyuria (urination) ne-polydipsia (ukomela okukhulu). ...
Ukuvimbela ushukela kwabesifazane
Amalungiselelo wokuvinjwa kwesifo sikashukela Isifo sikashukela yisifo esingamahlalakhona esihambisana nokuntuleka kokukhiqizwa kwama-pancreas kwe-insulin noma ukunganakwa kwezicubu ezithambile esenzweni sehomoni. ...
Ungayihlukanisa kanjani i-glycemia ekuhlaselweni ukwethuka nokuthi yini okufanele uyenze uma "umbozwe"
Izinja Zezinsizakusebenza Zesifo Sikashukela "Izinja zensizakalo eziqeqeshelwe ukuqeqeshwa okukhethekile njengoDaisy zikhala ngokukhala kokwehla ngoshukela wegazi. Uma uthembele kwi-insulin, umngane onjalo othembekile angakusindisa impilo yakho. ...
Ngingakwazi ukudla uphizi obhontshisiwe weshukela? Yiziphi izinhlanga ezisebenzayo? Izinzuzo zokuthosiwe zikaphayi Izitsha ngokufakwa kokhakela okuluhlaza Eminye imithetho yokupheka Ukwelashwa kwamajoyinti, abafundi bethu basebenzise ngempumelelo i-DiabeNot. ...
Ama-cholesterol gallstones - Kusho ukuthini nokuthi kufanele ukwelashwa kanjani?
Amatshe e-cholesterol gallstones Amatshe e-cholesterol - uhlobo oluvame kakhulu lwama-gallstones - kungaba ne-cholesterol iyodwa, noma isakhi esiyinhloko se-calculi. ...
Uma ushukela wegazi uhambisana nezinkomba 5, 6, yini okufanele yenziwe?
Uma ushukela wegazi uhlangana no-5.6, yini okufanele yenziwe? Isifo sikashukela yisifo esingajabulisi kakhulu, esisindwa yizinkinga eziningi futhi esidinga ukubhekwa njalo. ...
Siza ngedayari yokudla ngicela
Idayari yezondlayo kanye nezinkwa zesinkwa - yini, kungani futhi kungani, kusho isazi se-endocrinologist. Khombisa idayari yakho yokudla! ...
Izindawo ze-cholesterol ezitsheni zobuchopho: ingozi, ukuhlanza, ukuvikela imfundo
Ama-cholesterol plaques emithanjeni yobuchopho i-Cholesterol emithanjeni yobuchopho adala izithiyo zemishini yokugeleza kwegazi okujwayelekile futhi, ngenxa yalokho, ahlinzeka ubuchopho nge-oksijini nezakhi zomzimba. ...
Ngabe ngidinga ukushiya ushukela nokuthi ngikwenze kanjani?
2.Izifo Zenhliziyo Noma kungenzeka ukumangala kuwe, ngaphezu kwesifo sikashukela, ukudla ushukela kuhlobene kakhulu nesifo senhliziyo. ...
Isifo sikashukela enganeni. Ungabona kanjani ukuthi uzokhala nini i-alamu neminye imibuzo efana nale. ...
I-pathogenesis, izibonakaliso kanye nokwelashwa kwesifo sikashukela se-steroid
Isifo sikashukela seSteroid, izimpawu nokwelashwa. Izimbangela zokuthuthuka, izibonakaliso kanye namaqhinga wokulashwa kwesifo sikashukela Sesifo sikashukela i-mellitus, umzimba unokuntuleka ngokuphelele kwe-insulin. ...
I-Alcohol ne-atherosclerosis. Kuliqiniso yini ukuthi utshwala buhlanze imithambo yegazi? ...